ဘေဘီလေးက သံပရာသီး စားလို့ရလား ......... - Hello Sayarwon
သံပရာသီး က ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိထားပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ချဉ်တဲ့ အရသာရှိပေမယ့် အရသာက ခံတွင်းရှင်းစေပြီး လန်းဆန်းစေတာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။
ဟင်းလျာတွေထဲ ထည့်စားသလို၊ အသားပြုတ်တွေကို အရသာတိုးစေဖို့လည်း သံပရာသီး ထည့်စားလေ့ရှိပါတယ်။ သံပရာသီးကို အစားများတဲ့ ပုံစံကတော့ သံပရာရည် အေးအေးချိုချိုလေး သောက်တာပါ။ သံပရာရည် အေးအေးချိုချိုလေးက ခေါင်းကြည်စေသလို ခံတွင်းရှင်းစေပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ သံပုရာရည် သောက်နေတုန်း Juice လား တီတီ ….. သားသားလည်း သောက်မယ်ဆိုလို့ ချဉ်တယ် မသောက်ရဘူးပဲ ပြောရမလား ….. နည်းနည်းလောက်ပဲ တိုက်လိုက်ရမလားဆိုပြီး ဝေခွဲရခက်နေတဲ့ တီတီ၊ လေးလေးတို့အတွက် ဘေဘီလေးက သံပရာရည် သောက်လို့ရလား …. သံပရာသီးရော စားလို့ ရလားဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ဘေဘီလေးက သံပရာသီး စားလို့ရလား ………
ဘေဘီလေးက သံပရာသီး စားလို့ရလားဆိုတော့ ရပါတယ်။ သံပရာသီးက အချဉ်ဓာတ် ပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် လိမ္မော်သီး၊ ဂရိတ်ဖရု၊ ရှောက်ချိုသီး၊ ကျွဲကောသီးတို့နဲ့ မျိုးရင်းတူပါတယ်။
ဒါကြောင့် သံပရာသီးကလည်း ဘေဘီလေး စားလို့ရတဲ့ အသီးတစ်မျိုးလို့ ဆိုတာပါ။
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ သံပရာသီး ကျွေးမလဲ ……
ဘေဘီလေးက အစာမာတွေ စစားတတ်ပြီ အသက် ၆ လပြည့်ပြီဆိုရင် သံပရာသီးကို စကျွေးလို့ ရပြီဆိုပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ ဘေဘီလေး အသက် ၈ လ ကနေ ၁၀ လလောက် ရောက်မှသာ သံပရာသီးကို စမိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို သံပရာသီး စကျွေးတဲ့အခါ သံပရာသီးကို အရည်ညှစ်ပြီး ရေနဲ့ရောလို့ သံပရာရည်လိုမျိုး တိုက်ပေးတာ၊ ဘေဘီလေး နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အသီးအရွက်ပြုတ်၊ အသားပြုတ်တွေပေါ်မှာ နည်းနည်းလောက် ညှစ်ထည့်ပေးတာမျိုး လုပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါ။
ဘေဘီလေးကို သံပရာသီးက ဘယ်လို ထောက်ကူပေးလဲ ……
သံပရာသီးက ဘေဘီလေးကို ကျန်းမာစေဖို့ အခုလို ထောက်ကူပေးပါတယ်။
သံပရာသီးက ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းသလို ဆိုဒီယမ်၊ အဆီ နဲ့ ကိုလက်စထရော လုံးဝ မပါဝင်ပါဘူး။
အမျှင်ဓာတ် ပြည့်ဝသလို ဗီတာမင် C ကိုလည်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိစေမှာပါ။
နောက်တစ်ချက်က သံပရာသီးမှာ ဘေဘီလေးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင် B6 တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
သံပရာသီးမှာ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သံဓာတ်စုပ်ယူမှု ကောင်းစေပြီး သံဓာတ် အားနည်းတာကြောင့် သွေးအားနည်းတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် C ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် C ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို အရေပြား ပြဿနာတွေ ကင်းစေမှာပါ။
ဗီတာမင် C ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံသားလည်း ကျန်းမာစေမှာပါ။
ကယ်လ်ဆီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် သွားတွေကို ကြံ့ခိုင်စေမှာပါ။
ကယ်လ်ဆီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် အရိုးတွေကိုလည်း သန်မာစေမှာပါ။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို နာတာရှည် ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်နေတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေမှာပါ။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာပါ။
အချဉ်ဓာတ် ပါဝင်နေတာကြောင့် နည်းနည်းပဲ ကျွေးဖို့တော့ လိုပါမယ်။ သံပရာသီးကို ဒီအတိုင်း မကျွေးမိဖို့လည်း သတိထားစေချင်ပါတယ်။
Can I Give My Baby Lemon, And When? https://momlovesbest.com/lemon-for-baby Accessed Date 26 October 2021
When can babies eat lemon? https://solidstarts.com/foods/lemon/ Accessed Date 26 October 2021